Adeegga - Chengdu Duolin Electric Co., Ltd.
Imtixaanka Codsiga iyo Qiimeynta
U soo dir ujeedkaaga kululaynta, qalabka kuleylka, waqtiga kuleylka, heerkulka kululaynta, injineerka arjiga ayaa ku siin doona xalka kuleylinta ku -habboonaanta, tijaabinta bilaashka ah, qiimee waxa aad ka faa'iideysan karto hannaanka kuleylinta induction, waxaa kuu fiican adiga inaad sameyso go'aan sax ah oo kama dambeys ah
Naqshadaynta iyo Warshadaynta
Waxaan u naqshadeynnaa oo u soo saarnaa mashiinka induction -ka dalabyo fara badan oo kala duwan iyo baahida macmiilka, oo ay ku jiraan midabka, luqadda iyo astaantaada.
Qaab -dhismeedka khadka wax -soo -saarka dhammaystiran iyo miisaaniyadda, falanqaynta qiimaha iyo faa'iidada.
Waxaan baari doonnaa, falanqeyn doonnaa oo siin doonaa xalka kululaynta ee hagaajinta wax -soo -saarka joogtada ah ee macaamilka
Khadka wax -soo -saarka kuleylinta induction otomaatiga ah, hagaaji jawiga shaqada halkii gaas dhaqameedka ama kululaynta yoolka.
Dukumiintiyo faahfaahsan oo ku saabsan nidaamka kululaynta induction buuxa ayaa laguu soo bandhigi doonaa si loo rakibo, oo ay ku jiraan Isku -xidhka Korontada iyo isku -xidhka biyaha qaboojiyaha, buug -gacmeed iwm Waxaan u diri karnaa injineer warshaddaada si uu gacan uga geysto rakibidda iyo tababarka hawl -maalmeedka iyo dayactirka.
Buugga leh sawir iyo fiidyow ayaa fududeynta rakibidda, khadka & adeegga farsamada goobta sidoo kale waa la heli karaa.
Duolin wuxuu macaamiisha siiyaa dood farsamo iyo mid dhaqaale oo ku saabsan maalgashiga hantida kuleylinta induction ee wax soo saarkaaga iyadoo la tixgelinayo qaabeynta nidaamka ugu fiican.
Qaab -dhismeedka khadka wax -soo -saarka oo dhammaystiran iyo miisaaniyadda ayaa loo soo bandhigi karaa tixraac.
Dayactirka & qaybaha dayactirka
Ku siiyaan khadka & goobta caawimaad farsamo ee Dayactirka Ka -hortagga iyo Sixitaanka. Jawaab -celin deg -deg ah oo ku saabsan dayactirka iyo dayactirka macmiilka (8 saacadood gudahood), tusaha xallinta dhibaatooyinka oo leh sawir & fiidiyow iyo adeegga injineerinka khadka ayaa kaa caawinaya inaad si fudud u dayactirto koronto -dhaliye. Qaybaha firaaqada ah ayaa la heli doonaa weligood.
Waxaan u naqshadeynnaa soosaarista iyo dayactirka nooc kasta oo ka mid ah xargaha induction/inductors ee warshadaha loogu talagalay qalabkeenna
Tababbarka rakibidda qalabka kululaynta Induction
Tababarrada Habraacyada & Codsiyada
Tababbarka dayactirka & hawlgalka
Tababar la habeeyay